मकवानपुर । डा. गोविन्द केशीलाई विनासर्त रिहाईको माग गर्दैै मकवानपुरको हेटौंडामा प्रदर्शन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको मानहानीको आरोपमा अनशन स्थलबाटै पक्राउ गरिएका डाक्टर केशकिो समर्थनमा हेटौंंडामा प्रदर्शन गरिएको हो । विभिन्न पेशामा आबद्द युवाहरुले हेटौंडाको बुद्दचोकमा आज प्रर्दशन गरेका हुन् ।
केशीको समर्थनमा हेटौंडाको बुद्धचौकदेखि सीमाचोकसम्म शान्तिपूर्ण र्याली समेत आयोजना गरिएको पाइएको छ । हातमा प्लेकार्ड बोकेर डाक्टर केसीको निशर्त रिहाईको माग गर्दै र्याली गरिएको हो सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश गोपाल पराजुलीको राजीनामाको माग गर्दै अनशनमा बसेका डा. केशीलाई अदालतको आदेश लगत्तै प्रहरीले पक्रेको थियो । रातको समयमा पक्राउ परेका उनलाई रिहाइको माग गर्दै मकवानपुर लगायतभर प्रदर्शन भएको हो ।
हेटौंडामा आयोजित प्रदर्शनीमा स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, विभिन्न पेशामा सक्रिय रहेका नागरिकको सहभागिता रहेको प्रदर्शनमा सहभागी बनेका स्वास्थ्यकर्मी उत्सव चौलागाईंले जानकारी दिए । विगतमा पनि डा. केशीको मागका विषयमा आफूहरुले समर्थन गर्दै हेटौंडामा प्रदर्शन गर्दै आइरहेको उनले बताए ।